Somalia oo Waqti u qabatay in Dalka uu uga baxo Madaxa FAO ee Somalia. – Hornafrik Media Network
Dowladda Soomaaliya ayaa u qabatay in Dalka looga saaro Madaxii Hay’adda FAO ee Somalia muddo 3 Maalmood oo ay ugu dambayso Maanto. Waxaana Mr Richard Trichard ay ku eedaysay Dawladda Somalia inuusan lahayn Hab Dhaqan Masuuliyadeed, isla markaana uu ula dhaqmay si ka baxsan Akhlaaqda Wasiiro ka tirsan Dawladda Somalia.
Qoraal ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somalia waxaa lagu sheegay sidoo kale inuusan ahayn Qof u qalma inuu wajaho Abaaraha Somalia. Waxaa lagu xusay Warqada inuu la yimid Wakiilku Hab Dhaqan iyo Akhlaaq aad u liita.
Afhayeen u hadlay Qaramadda Midoobay ayaa isna dhinacooda sheegay inuu socdo Wadahadalo ku aadan Arrinta Mr Richard oo ay wada leeyihiin Qaramadda Midoobay iyo Dawladda Somalia. wuxuuna ka gaabsaday in la fulinayo Amarka Dawladda ee ah in Dalka laga saaro iyo in kale, taasoo uu ku xiray in Wadahadalka go’aan looga gaari doono.
Mar la waydiiyay Afhayeenka in Eeda Mr Richard lagu eedeeyay inay u muuqato iyo in kale, waxa uu ku riixay inay tahay in la waydiiyo arrintaasi Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somalia oo Eeddan soo jeedisay haddii ay haysto Cadaymo dheeriya. Wuxuuse ku tilmaamay Mr Richard nin shaqo wanaagsan qabtay intii uu joogay Xafiiska FAO ee Somalia.
Waa Markii ugu horaysay ee ay Dalbato Dawladda Somalia in la Cayriyo Wakiil ka socda Qaramadda Midoobay.
Dagaal xooggan oo xalay ka dhacay Baardheere, Al-Shabaab oo weeraray xero ciidan